ZOMA 22 NOVAMBRA 2019
FINOANA SILAMO ETO MADAGASIKARA : Niavaka ny fankalazana ny « AÏd El Kebir” na ny “AÏd Be”
Maneho firaisan-kina hatrany ny mpino silamo eto Madagasikara. Mainka nihamafy io firaisankina io raha ny hita nandritra ny fankalazana ny « AÏd El Kebir” na ny “AÏd Be” ny alahady teo. 13 août 2019
Ho an’ny mpino silamo tetsy amin’ny 67 ha sy ny fikambanana zanak’Avaratra dia nisy ny fiaraha-mankalaza ny “AÏd Be”, tetsy amin’ny trano fonenan’i Papa Soulé. Niavaka ny fankalazana satria nanatrika ity fotoana ity ny filohan’ny fikambanana FITEFA sy ny mpanolotsain’ny Filoha Andry Rajoelina notronin’ireo manam-boninahitra sy manampahefana maro eto amin’ny firenena. Tsiahivina fa ny « Aïd Be » na ny « Aïd Kebir » dia fetin’ny fanapahana ary ny mpino silamo rehetra maneran-tany dia samy mankalaza azy ity avokoa.
Nankasitrahan’i Papa Soulé ny firaisankinan’ny Malagasy ary notsindriany manokana fa tsy afaka nankalaza ny « Aïd Be » na ny « Aïd Kebir » ny mpino silamo raha tsy teo ny fiombonan’ny Malagasy tsy ankanavaka. “Andriamanitra iray ihany no ivavahantsika ary harena ho antsika izany satria miara-mifety avokoa amin’izao ny mpino silamo sy ny Kristianina satria Malagasy iray ihany isika rehetra ary ra malagasy no mikoriana ao anatintsika”, hoy ny nambarany.
Ankoatra izay dia nambarany ihany koa fa ny fampandrosoana an’i Madagasikara no tanjona iombonan’ny rehetra, ka tsy tokony ho very amin’ny adilahy politika sy ny tsy fitoviam-pijery : “Tsy mila politika be isika fa ny fampandrosoana an’i Madagasikara no tanjona iraisana. Mila fifanomezan-tanana izany. Mila miasa miaraka ny rehetra. Tsy vitan’ny fitondram-panjakana irery izany ary tsy misy firenena mandroso raha miasa irery tsy miaraka amin’ny vahoaka ny fitondram-panjakana. Tsy apetratsika eto ny fahantrana satria samy tompon’andraikitra isika rehetra. Ny tanora no ho avin’ity firenena ity ka mila mijoro, mitsangana, miezaka mitady fomba hampandrosoana ny firenena ny ray aman-dreny sy ny tanora. Mila mifanohana” hoy hatrany ny fanambarany.
Handray anjara amin’ny fitsenana ny Papa François ny mpino silamo
Handray anjara amin’ny fitsenana ny Papa amin’ny volana ambony ihany koa ny mpino Silamo, hoy Moussa Soilih. Ny antony, hoy izy, dia satria namonjy ny firenena silamo ny Papa nandritra ny fandalovany tany Aboudabi sy Maroc. “Mendrika ny nataony ka mba asehonay mpino silamo ihany koa fa miray hina amin’ny finoana hafa ny silamo eto Madagasikara satria samy Malagasy rahateo isika. Mila asehontsika amin’izao tontolo izao fa i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra dia tsy mitovy amin’ny firenena hafa ka mora ampiadiana ny tsy mitovy finoana, modely ny vahoaka eto Madagasikara, afaka miara-monina na dia eo aza ny fahasamihafana.”, hoy hatrany ny nambaran’i Moussa Soilih.
Araka ny fanazavana dia misy fety roa ny “AÏd” ho an’ny mpino silamo : Ny voalohany dia ny AÏd el Fitr izay nankalazaina tamin’ny fomba manetriketrika eran-tany, volana vitsivitsy lasa izany fa ny faharoa dia ny « AÏd El Kebir” na ny “AÏd Be” nankalazaina afak’omaly. Ny “Aïd be” dia hahatsiarovana manokana ny fitsapana nataon’Andriamanitra tamin’ny mpaminany Abrahama fony ity farany nasain’Andriamanitra nanao sorona ny zanany, izay nosoloina ondry avy eo rehefa hitan’Andriamanitra fa tsy nihemotra tamin’ny fanaovana sorona ny zanany noho ny fanompoana azy i Abraham. Misy ifandraisany amin’ny tantara sy ny fomba amam-panao Malagasy ny AÏd Be : “Raha iverenantsika ny tantara dia io ilay “alahamady” na “Allah Aïd Be” lazain’ny Malagasy, misy itoviany ireo na ara-tantara na ara-pomba”, hoy koa ny fanazavan’i Moussa Soilih.
A. Lepêcheur/Ny Ami
Fiara iray nitsoaka rehefa nahafaty lehilahy avy nijery tolon’omby ANDRANOMANELATRA- ANTSIRABE II (258) 19 novembre 2019 Miandry fitsarana any am-ponja ilay ramatoa taorian’ny halatra gisa nataom-badiny MANERINERINA (197) 19 novembre 2019 Sarona izy roa lahy ikoizana amin’ny resaka asa fanendahana sy harom-paosy ISOTRY (167) 19 novembre 2019 Efa nitsapa ny Kianjaben’i Mahamasina sahady ny Barea, omaly LALAO AMIN’NY 16 NOVAMBRA (158) 19 novembre 2019 Saron’ny mpitandro filaminana ireo mpamaky fasana ANDRANOMANELATRA ANTSIRABE (141) 20 novembre 2019 Ny sakaizan-drainy ihany no nanafina azy FAHAVEREZAN’I TANIAH TENY SOAVIMASOANDRO (103) 20 novembre 2019